အချင်းချင်း အားပေးနှစ်သိမ့်နေ ပြီး လွတ်မြောက် ရေးနယ်မြေမှာ တိမ်းရှောင်ရင်း တဲ့ပုံလေးကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေ အချစ်ပိုနေရတဲ့ ချစ်သုဝေ…. – Shwe Naung
အချင်းချင်း အားပေးနှစ်သိမ့်နေ ပြီး လွတ်မြောက် ရေးနယ်မြေမှာ တိမ်းရှောင်ရင်း တဲ့ပုံလေးကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေ အချစ်ပိုနေရတဲ့ ချစ်သုဝေ….
N N | June 15, 2021 | Celebrity | No Comments
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…ချစ်သုဝေ ကတော့ ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက အဆိုတော် လုပ်ရင်း မြန်မာဇာတ်လမ်း တွေမှာလည်း ကျရာနေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ခဲ့တာကြောင့်
ပရိသတ် တွေရဲ့အားပေးမှု ကို ခံခဲ့ရ သူလေးဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သုဝေ ကတော့ ဆရာဝန် တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ အနုပညာ အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ရင်း အဆိုတော် လင်းလင်းနဲ့
အိမ်ထောင် ကျပြီးလို့ ခေတ်ခေတ်နဲ့ သစ်သစ် လို့ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ မိသားစု ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သာယာပျော်ရွင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေးမှာ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးအပြင်
ခေတ်သစ် ဖောင်ဒေးရှင်းကို တည်ထောင်ထားပြီး ခွဲစိပ် ဖို့လိုအပ်တဲ့ ကလေးတွေ ကိုလည်း ကုသိုလ် ယူရင်း ရောဂါကု သပေးနေတာဖြစ်ပါ တယ်။
ခုလို မတည်ငြိမ် ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးမှာလည်း ချစ်သုဝေတို့ လင်မယား ကတော့ ပြည်သူတွေ နဲ့အတူ ရင်ဘတ် ချင်းနီးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ လင်မယား နှစ်ယောက်စလုံး ဖမ်းဝရမ်းထုတ် ထားခံရတာကြောင့် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့လေးမှာ တော့ မေမေချစ်သုဝေ က လွှတ်မြောက် နယ်မြေတစ်ခုမှာ အချင်းချင်းအားပေးနေ တဲ့ပုံလေးကို တင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မေမေ ချစ်သုဝေကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်သုဝေကို အားပေး စကားလေး ပြောပေးသွားကြ ပါအုံးနော်..
ဖြူဖွေး ဝင်းပသွယ်လျှ အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေးနဲ့ လှသွေးကြွယ်နေတဲ့ ချောကလျာ